एक स्थानीय नेटवर्क कसरी जडान गर्न?
सबैलाई आज तीव्र गति सूचना प्रविधि विकास छन् के थाह छ। प्रत्येक घर त्यहाँ अब कम्तिमा एक कम्प्युटर हो, र केही तिनीहरूले दुई वा बढी प्रतिनिधित्व। यसलाई जो उदाहरण, पाटी, र अन्य विभिन्न ग्याजेटहरू लागि, कम्प्युटर जस्तै सुविधाहरू छ उपकरणहरू, को वजन बारेमा बिर्सनु हुँदैन। यी उपकरणहरू एकीकृत सूचना नेटवर्क, डाटा को विनिमय द्वारा कार्यान्वयन गरिने को गठन आवश्यक पर्दछ। कसरी जडान गर्न: र त्यसपछि धेरै प्रश्न देखा पर्न सक्छ एक स्थानीय नेटवर्क? अर्को, तपाईं यसलाई सिक्न र यसलाई कसरी डिजाइन, माथि आवश्यक उपकरण र इष्टतम प्रविधि, साथै बाँकी रोज्नुहोस्।
एक प्रारम्भिक चरण: एक स्थानीय नेटवर्क कसरी जडान गर्न
यो अवस्था नै घर भित्र फरक उपकरणहरू संयोजन मा वर्णन गरिने एकैचोटि भन्नुपर्छ। आफ्नो घर एक भन्दा बढी उपकरण छ भने, त्यहाँ जानकारी विनिमय लागि जारी आवश्यकता छ। तपाईंलाई एक उपकरण डेटा को ठूलो मात्रा प्रतिलिपि गर्न आवश्यक गर्दा, तपाईंले बाह्य हार्ड ड्राइभ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो सही आकार को हार्ड डिस्क हात मा हुन सक्छ रूपमा, सुविधाजनक सधैं छ। अर्को महत्वपूर्ण बिन्दु केही बाह्य उपकरणहरू, जो मिडिया खेलाडीहरू, नेटवर्क समावेश लागि आवश्यकता छ डाटा भण्डारण, प्रिन्टरहरू र अधिक। यसलाई इन्टरनेटमा सार्वजनिक पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक देखिन सक्छ। अक्सर यो कारण छ र मुख्य यस्तो जडान जबरजस्ती संगठित छ।
योजना चरण: एक लैन कसरी जडान गर्न
धेरै बारे आफ्नो घर नेटवर्क योजना छ कसरी महत्त्वपूर्ण अन्दाज लगाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुरक्षा र विश्वसनीयता, साथै डाटा दर र अन्तिम वित्तीय लागत असर गर्छ। तपाईं योजना चरण यी विशेषताहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं उपयुक्त नेटवर्क प्रविधि निर्धारण गर्न चाहनुहुन्छ सुरु गर्न, त्यो छ, यो एक तार वा वायरलेस नेटवर्क हुनेछ। यो मिश्रित संस्करण प्रयोग गर्न सम्भव छ। कुनै पनि मामला मा, यो समाधान गर्न आवश्यक छ। अब यो नेटवर्क उपकरणहरू को राशि र उद्देश्य निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। र अन्तिम, तर कम से कम, यो केबल, नेटवर्क उपकरण स्थान अंक आफ्नो योजना, साथै बाँकी हुनुपर्छ।
एक स्थानीय नेटवर्क कसरी जडान गर्न: को चरण
त्यसैले, नेटवर्क जडान गर्न, तपाईं एक कम्प्युटर पैच तार प्रयोग गरेर नेटवर्क स्विच जडान गर्नुपर्छ। यो सबै कम्प्युटर नेटवर्क स्विच गर्न मार्फत जडान गर्न आवश्यक छ नेटवर्कमा केबल, त्यसपछि सकेट स्विच जडान, बारी। त्यसपछि तपाईं शारीरिक उपस्थिति र जडानहरू जाँच गर्न आवश्यक छ। यो गर्न, हेर्न नेटवर्क जडान प्रत्येक कम्प्युटरमा। मिश्रित उपस्थिति मा सेटिङ सुरु गर्न सम्भव छ।
एक लैन जडान कसरी स्थापित गर्न
स्थानीय कनेक्शन को गुण प्रविष्टि गर्नुहोस् र जडान प्रोटोकल (TCP / IP) चयन गर्नुहोस्। सामान्य मा, सबै सेटिङ स्वतः छन्, तर हाम्रो सन्दर्भमा हात द्वारा सबै गर्न आवश्यक छ। तपाईं पछि तपाईं भर्नुहोस् सक्नुहुन्छ सेटिङ मार्गदर्शन चयन गर्नुहोस्। यसो गर्न, तपाईं आईपी-ठेगाना प्रविष्ट गर्नुपर्छ -। 192.168.1 * (* - संख्या दायरा 1-255 मा नम्बर)। जो एकदम स्थापित नेटवर्क मा एक कम्प्युटर लागि पछि खोज गति हुनेछ, क्रममा नम्बर प्रयोग गर्न हुँदैन। क्षेत्र सबनेट मास्क प्रस्तावित जस्ता छोड्नुहोस्। तपाईं एक घर नेटवर्क प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अन्य क्षेत्रहरू, छैन भरिएको आवश्यक छ। को "ठीक" थिचेर विन्डो बन्द गर्नुहोस्। अब तपाईं अन्य सबै मिसिन मा नै सेटिङहरू बनाउन सक्छ। प्रत्येक कम्प्युटर लागि, तपाईं आफ्नो नाम को गुण र काम समूह को नाम मा दर्ता गर्नुपर्छ। यो लागि अवस्था मात्र छ - यो काम समूह अन्यथा एक जडान सिर्जना गर्न सक्षम हुने छैन नै हुनुपर्छ। सबै सेटिङ पछि सबै मिसिन पुनः सुरु गर्न मात्र छ। त्यसपछि तपाईँ साझेदारी र अन्य मापदण्डहरू समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं कसरी त्यसपछि सबै समान, विन्डोज7एक लैन जडान गर्न सोच छ भने।
वायरलेस नेटवर्क जडान: कुनै जडान, जडान त्रुटि र अन्य समस्या। एक वायरलेस वाइफाइ नेटवर्क स्थापना
कसरी फोन नम्बर बिना पृष्ठ "VKontakte" सिर्जना गर्न: पूर्ण निर्देशन
को "सम्पर्क" प्रो-जीवनमा स्थितिहरुमा: बयान लागि सबै भन्दा राम्रो सामाजिक सञ्जाल
सकेट आधारित डेल्फी ग्राहक-सर्भर
"Instagramme» जवाब टिप्पणी गर्न कसरी बारेमा विवरण
सोफिया कैथेड्रल, भोलोग्डा। सबैभन्दा पुरानो पत्थर भवन भोलोग्डा मा - को xvi शताब्दीको एक वास्तुकला स्मारक
इङ्गल्याण्ड र यसको शाही राजवंशहरु को एक संक्षिप्त इतिहास
एफएम ट्रांसमीटर, एलईडी
गार्निअर «साफ छाला" - समस्या एक व्यापक दृष्टिकोण
Zaparoleny कम्प्युटर रूपमा? कसरी आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्न?
स्लाव भाषाहरु र मेक्सिकन परम्परा: विभिन्न संस्कृति मा शरत्काल विषुव
"लेनोभो A859": समीक्षा, फोटो, मूल्यहरु र मोडेल को विवरण
आकर्षण रेजेन्सबर्ग: सिंहावलोकन, वर्णन, इतिहास र समीक्षा